Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.4.3 Mmechi
Enwere ike inweta nchịkọta data, na n'ọdịnihu, ọ ga-agụnye ụzụ na ikere òkè.
Dịka eBird na-egosi, a ga-eji kesaa data nchịkọta maka nchọpụta sayensị. Ọzọkwa, PhotoCity na-egosi na nsogbu ndị metụtara nlele na njirimara data nwere ike ịgbagha. Kedu ka ị ga-esi kesaa ọrụ nchịkọta data maka nchọpụta mmadụ? Otu ihe atụ sitere na ọrụ Susan Watkins na ndị ọrụ ibe ya na ọrụ Malawi Journals (Watkins and Swidler 2009; Kaler, Watkins, and Angotti 2015) . N'ime oru ngo a, mmadụ iri abụọ na abụọ na-akpọ "ndị nta akụkọ" - na-ezipụ "magazin mkparịta ụka" nke e dekọrọ na mkparịta ụka ha nụchara banyere AIDS n'oge ndụ nke ndị nkịtị (n'oge a malitere, ihe dị ka pasent 15 nke ndị okenye na Malawi bu nje HIV (Bello, Chipeta, and Aberle-Grasse 2006) ). N'ihi ọnọdụ ha na-enyocha, ndị nta akụkọ a nwere ike ikpuchi mkparịta ụka ndị nwere ike ịbụ ndị na-eme nchọpụta na Watkins na ndị na-eme nchọpụta na Western (m ga-atụle omume ọma nke nke a n'isiakwụkwọ ahụ mgbe m nyere ndụmọdụ gbasara ịmepụta ọrụ nke aka gị) . Ihe data site na Malawi Journals Project emewo ka ị nweta ọtụtụ ihe dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, tupu oru ahụ amalite, ọtụtụ ndị si mba ọzọ kwenyere na e nweghị ọgbachi banyere ọrịa AIDS na mpaghara Sahara Africa, mana akwụkwọ akụkọ na-egosi na nke a doro anya na ọ bụghị ikpe: ndị nta akụkọ nụrụ ọtụtụ narị mkparịta ụka banyere isiokwu ahụ, na ebe dị iche iche olili ozu, Ogwe, na ụka. Ọzọkwa, ọdịdị nke mkparịta ụka ndị a nyeere ndị nchọpụta aka ịghọta nke ọma ụfọdụ n'ime iguzogide iji condom mee ihe; ụzọ e si eji condom eme ihe na ozi ahụike ọha na eze adịghị ekwekọ na ụzọ a na-atụle ya ná ndụ kwa ụbọchị (Tavory and Swidler 2009) .
N'ezie, dị ka data sitere na eBird, data sitere na Malawi Journals Project abụghị nke zuru oke, otu esemokwu nke Watkins na ndị ọrụ ibe ya tụlere n'ụzọ zuru ezu. Dịka ọmụmaatụ, mkparịta ụka ndị e dere ede abụghị ngosipụta nke mkparịta ụka niile ọ bụla. Kama nke ahụ, ha bụ ọnụ ọgụgụ ezughị ezu nke mkparịta ụka gbasara AIDS. N'ihe gbasara ogo data, ndị nnyocha ahụ kwenyere na ndị nta akụkọ ha bụ ndị nta akụkọ, dị ka ihe àmà na-egosi na ha na-agbaso na magazin na akwụkwọ akụkọ. Nke ahụ bụ, ebe ọ bụ na e debere ndị odeakụkọ n'obere ọnọdụ zuru ezu ma lekwasị anya n'otu isiokwu, ọ ga-ekwe omume iji redundancy nyocha ma hụ na njirimara data. Dịka ọmụmaatụ, otu nwoke na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - akpọ "Stella" gosiri ugboro ugboro n'akwụkwọ akụkọ nke ndị nta akụkọ anọ (Watkins and Swidler 2009) . Iji mekwuo nkwenye gị, tebụl 5.3 na-egosi ihe atụ ndị ọzọ nke nchịkọta data wepụtara maka nchọpụta mmadụ.
Isiokwu 5.3: Ihe Nlereanya nke Nchịkọta Mkpokọta Gbasara Gbasara Ndị Mmadụ na Nnyocha Nlekọta
Mkparịta ụka banyere HIV / AIDS na Malawi Watkins and Swidler (2009) ; Kaler, Watkins, and Angotti (2015)
Street na-arịọ na London Purdam (2014)
Esemokwu na Eastern Congo Windt and Humphreys (2016)
Ọrụ akụ na ụba na Nigeria na Liberia Blumenstock, Keleher, and Reisinger (2016)
Nyocha onyunyo Noort et al. (2015)
Ihe omuma atu ndi a akowara na mpaghara a abuanawo n'inwe aka oru: ndi oru nta akuko edeputara mkparita uka ha nuru; ndị nnụnụ na-ebute akwụkwọ ndebanye aha ha; ma ọ bụ ndị ọrụ kwadoro foto ha. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ikwekọrịta na-akpaghị aka ma ọ bụghị ihe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụ oge ị ga-edozi? Nke a bụ nkwa a na-enye site na "ntinye uche" ma ọ bụ "ndị na-ahụ maka ndị mmadụ." Dịka ọmụmaatụ, Pothole Patrol, nke ndị ọkà mmụta sayensị na MIT na-arụ ọrụ, na-etinye ígwè ngwangwa na GPS n'ime ụlọ ọrụ taxi asaa na Boston (Eriksson et al. 2008) . Ebe ọ bụ na ịkwọ ụgbọala na-egosi ihe ịrịba ama dị mgbagwoju anya, ngwaọrụ ndị a, mgbe a na-etinye n'ime taxis na-akpụ akpụ, nwere ike ịmepụta map nke pothole nke Boston. N'ezie, taxis anaghị emepụta okporo ụzọ ọ bụla, mana, nyere ụtụ isi zuru ezu, enwere ike ịnwe mkpuchi zuru oke iji nye ihe ọmụma banyere nnukwu akụkụ nke obodo ha. Uru nke abụọ nke ọtụtụ usoro na-adabere na nkà na ụzụ bụ na ha na-aghọta usoro nke inye data: ọ bụ ezie na ọ chọrọ nkà iji nye aka na eBird (n'ihi na ịkwesịrị ịme ka a mata ụdị nnụnụ), ọ dịghị mkpa ọ bụla iji nye aka na Pothole Patrol.
N'ịga n'ihu, echere m na ọtụtụ ọrụ nchịkọta data na-ekesa ga-amalite iji ike nke ekwentị mkpanaka nke ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-ebu. Ekwentị ndị a enweela ọtụtụ ọnụọgụ dị mkpa maka mmesho, dịka igwe, igwefoto, ngwaọrụ GPS, na clocks. Ọzọkwa, ha na-akwado ngwa ndị ọzọ nke na-enyere ndị nchọpụta aka ịchịkwa usoro okwu nchịkọta data. N'ikpeazụ, ha nwere Njikọ Ịntanetị, na-eme ka o kwe ha omume ịkwụsị-jupụta data ha na-anakọta. Enwere ọtụtụ ihe ịma aka na-arụ ọrụ, site na ihe mgbagwoju anya na-ejedebe batrị, mana nsogbu ndị a ga-ebelata oge ka teknụzụ na-amalite. Ihe ndị gbasara metụtara nzuzo na ụkpụrụ omume, n'aka nke ọzọ, nwere ike inwekwu mgbagwoju anya; Agaghachi m ajụjụ banyere ụkpụrụ omume mgbe m na-enye ndụmọdụ maka ịmepụta mmemme gị.
N'ime ọrụ nnakọta data, ndị ọrụ afọ ofufo na-enye data gbasara ụwa. Enwere ike iji ụzọ a mee ihe n'ụzọ gara nke ọma, ọ ga-abụrịrị na iji ọdịnihu mee ihe ga-adakwasị nlele na nchebara data. N'ụzọ dị mma, ọrụ ndị dị ugbu a dị ka PhotoCity na Pothole Patrol na-atụ aro ngwọta maka nsogbu ndị a. Dika oru ndi ozo na-eji uru nke sayensi eme ka ndi mmadu na-enweghi ikike na ndi na-agabiga oke ókè, kesaa oru nchịkọta data kwesiri ibuwanye n 'onu ogugu, nyere ndi oru nyocha aka ichota data nke anaghi eme ihe n'oge gara aga.